Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Internet Knowledge » Wifi ပေးလို့ရမရ.....သိချင်လို့ပါ
1 Wifi ပေးလို့ရမရ.....သိချင်လို့ပါ on 19th October 2011, 8:54 pm
ကျွန်တော် sky net တစ်လိုင်းဝယ်ထားပါတယ်....အဲ့ဒါကို တစ်မိုင်လောက်အဝေးကသူငယ်ချင်း(မြို့တောင်စ နဲ့ မြောက်စ) ရှယ်ယာ ပေးချင်ပါတယ် .. wifi လွှင့်လို့ရမရ သိချင်ပါတယ် ....ဖြစ်နိုင်ရင် ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်...ကုန်ကျနိုင်မယ့် ငွေကြေးကို လည်းသိချင်ပါသေးတယ်....ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မြန်ဖြေပေးကြပါဗျာ....သူငယ်ချင်းကနားပူနေလို့
Myanmar2change လို့မရလို့ ဇော်ဂျီ နဲ့ ပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်....
2 Re: Wifi ပေးလို့ရမရ.....သိချင်လို့ပါ on 20th October 2011, 12:27 am
yes u can with TP link wireless access point
i don't know the details of price..now
3 Re: Wifi ပေးလို့ရမရ.....သိချင်လို့ပါ on 21st October 2011, 10:10 am
Is it alsoawifi network bro?
Last edited by laminphyulin on 21st October 2011, 10:13 am; edited 1 time in total
4 Re: Wifi ပေးလို့ရမရ.....သိချင်လို့ပါ on 21st October 2011, 10:11 am
5 Re: Wifi ပေးလို့ရမရ.....သိချင်လို့ပါ on 7th November 2011, 12:30 pm
အဲ့ဒီလောက်ဝေးရင်တော့ ကိုယ့်ဖက် က အရင် လွှင့်မယ် တိုင်းကို သေချာလုပ်ရပါမယ့် ပြီးရင် တစ်ဖက် စက် က လက်ခံဖို့ ကို ပစ္စည်းတစ်ခု သုံးရပါ့မယ် ဒါပေမယ့် ကွန်နရှင်းက မကောင်းရင်တော့ ဘာမှ လုပ်လို့ မရပါဘူးး သူငယ်ချင်းက skynet ကို speed ဘယ်လောက်ယူထားလဲ အရင်သိချင်ပါတယ် နောက်ပြိး လိုင်းက အိမ်သုံးအတွက် ၀ယ်တာလား ဆိုင်သုံးအတွက် ၀ယ်တာလားဆိုတာလည်း သိချင်ပါတယ် အဲ့ဒါတွေ အကုန်သိမှ ကုန်ကျစရိတ်ရော ပစ္စည်းတွေရော ပြောပြလို့ ရမှာပါ ခင်ဗျာ
အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ ကျွန်တော် Gmail ကို အပ်ပြီး မေးပါခင်ဗျာ
" [You must be registered and logged in to see this link.]"
အဆင်ပြေတာတစ်ခုခု ကို အပ်ပြီးမေးပါ ခင်ဗျာ
6 Re: Wifi ပေးလို့ရမရ.....သိချင်လို့ပါ on 11th November 2011, 4:03 pm
သူငယ်ချင်းက skynet ကို speed ဘယ်လောက်ယူထားလဲ အရင်သိချင်ပါတယ် နောက်ပြိး လိုင်းက အိမ်သုံးအတွက် ၀ယ်တာလား ဆိုင်သုံးအတွက် ၀ယ်တာလားဆိုတာလည်း သိချင်ပါတယ်
512 လိုင်းပါ...အိမ်သုံး သက်သက်ပါခင်ဗျာ....။နောက်ပိုင်းတော့ ဆိုင်သုံးဖြစ်မလားမသိသေး... ။ဒီလိုပဲ သူငယ်ချင်းတွေ အချင်းချင်း လုပ်စားရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားမိ နေပြီ ....
7 Re: Wifi ပေးလို့ရမရ.....သိချင်လို့ပါ on 17th November 2011, 9:58 pm
laminphyulin wrote: ကျွန်တော် sky net တစ်လိုင်းဝယ်ထားပါတယ်....အဲ့ဒါကို တစ်မိုင်လောက်အဝေးကသူငယ်ချင်း(မြို့တောင်စ နဲ့ မြောက်စ) ရှယ်ယာ ပေးချင်ပါတယ် .. wifi လွှင့်လို့ရမရ သိချင်ပါတယ် ....ဖြစ်နိုင်ရင် ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်...ကုန်ကျနိုင်မယ့် ငွေကြေးကို လည်းသိချင်ပါသေးတယ်....ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မြန်ဖြေပေးကြပါဗျာ....သူငယ်ချင်းကနားပူနေလို့
Router တစ်လုံးလိုတယ် ။ CPE2လုံးလိုတယ် ။ အထပ်မြင့်မရှိရင် ၃ မိုင်ထိရတယ် ။
Router က 37000 ခန့် CPE က 50000 ကြိုးအပါ ။ လက်ခံက 100000 ခန့်ပေးရမယ်
ဆိုင်က ဆိပ်ကာသာလမ်းက Unique မှာရှိပါတယ်။
8 Re: Wifi ပေးလို့ရမရ.....သိချင်လို့ပါ